हामीले हालसालै गुगल ट्याग प्रबन्धकमा ग्राहकलाई रूपान्तरण गरिरहेका छौं। यदि तपाईंले ट्याग प्रबन्धनको बारेमा अझै सुन्नु भएको छैन भने, हामीले गहन लेख लेख्यौं, ट्याग प्रबन्धन भनेको के हो? - म तपाईंलाई यो पढ्न प्रोत्साहित गर्दछु।
ट्याग प्रबन्धनका फाइदाहरू बाहेक, गुगल ट्याग प्रबन्धकसँग गुगल एनालिटिक्स जस्ता अनुप्रयोगहरूको लागि केही नेटिभ समर्थन छ जुन तपाईं फाइदा लिन चाहानुहुन्छ। किनभने हाम्रो एजेन्सी हाम्रो ग्राहकहरु को लागी सामग्री रणनीति मा थोरै काम गर्दछ, हामी हाम्रो ग्राहकहरु बीच GTM विन्यास छन्। गुगल ट्याग प्रबन्धक र युनिभर्सल एनालिटिक्सको साथ, हामी गुगल एनालिटिक्सको सामग्री समूहहरूको साथ हाम्रो ग्राहकहरूको साइटहरूमा मूल कोड सम्पादन नगरीकन थप अन्तरदृष्टि कन्फिगर गर्न सक्दछौं। एक अर्कासँग काम गर्नका लागि दुबैलाई कन्फिगर गर्नु हृदयको मूर्छाको लागि होइन, यद्यपि मँ यो तपाईंको लागि कागजात गर्न चाहान्छु।
यदि तपाईं GTM तेस्रो-पार्टी प्लगइन वा एकीकरण प्रयोग गरेर कन्फिगर गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई सामान्यतया केवल तपाईंको लागि भनिन्छ कन्टेनर आईडी। म अगाडि बढेको छु र माथिको स्क्रीनशटमा सर्कल गरें। यसलाई लेख्ने वा बिर्सने बारे चिन्ता नलिनुहोस्, GTM ले तपाईंको GTM खातामा यसलाई राम्रो र सजिलो पाउँदछ।
[बक्स प्रकार = "चेतावनी" align = "aligncenter" वर्ग = "" चौडाई = "%०%"] तपाईं देख्नुहुनेछ कि म यो प्रयोगकर्ता संग सबै पहुँच प्रदान गर्दैछु। तपाइँ तपाइँको एजेन्सी पहुँच बिभिन्न तरीकाले व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया, तपाइँ तपाइँको एजेन्सी एक प्रयोगकर्ता को रूप मा जोड्नुहुनेछ र फिर तिनीहरुलाई सिर्जना गर्न तर प्रकाशित नगर्ने क्षमता दिनुहुन्छ। तपाईं प्रकाशन ट्याग परिवर्तनहरूको नियन्त्रण कायम राख्न सक्नुहुन्छ। [/ बक्स]
यद्यपि GTM यो बिन्दुमा तपाइँको साइटमा राम्रोसँग स्थापना गरिएको छ, यसले वास्तवमै केहि पनि गरिरहेको छैन जब सम्म तपाइँ तपाइँको पहिलो ट्याग प्रकाशित गर्नुहुन्न। हामी त्यो पहिलो ट्याग बनाउन गइरहेका छौं युनिवर्सल एनालिटिक्स। क्लिक गर्नुहोस् नयाँ ट्याग थप्नुहोस् कार्यक्षेत्रमा:
तपाईंले आफ्नो युएए-एक्सएक्सएक्सएक्सएक्स-कोड कोड प्राप्त गर्नुपर्नेछ तपाईंको गुगल एनालिटिक्स स्क्रिप्टबाट जुन तपाईंको साइटमा पहिल्यै छ र यसलाई सही सेक्सनमा प्रविष्ट गर्नुहोस्। अझै बचत क्लिक गर्नुहोस्! हामीले GTM लाई भन्नु पर्छ जब तपाईं त्यो ट्याग फायर गर्न चाहानुहुन्छ!
अब जब हाम्रो ट्याग राम्रोसँग कन्फिगर गरिएको छ, हामी यसलाई हाम्रो साइटमा प्रकाशित गर्न सक्छौं! प्रकाशित क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंलाई परिवर्तन कागजात लिन भनियो र तपाईंले के गर्नुभयो। यो अत्यन्त उपयोगी छ यदि तपाईंसँग धेरै साइट प्रशासकहरू र एजेन्सी साझेदारहरू छन् तपाईंको साइटमा काम गरीरहेको छ भने।
टैग: प्रयोगकर्ता पहुँच थप गर्नुहोस्Google विश्लेषणगुगल ट्यागगुगल ट्याग प्रबन्धकगुगल ट्याग प्रबन्धक प्रयोगकर्ता थप्नुहोस्गुगल ट्याग प्रबन्धक कन्टेनरगुगल ट्याग प्रबन्धक ट्रिगरगुगल सार्वभौमिक एनालिटिक्सजीटीएमgtm कन्टेनरकसरीगुगल ट्याग प्रबन्धक स्थापना गर्नुहोस्पृष्ठदृश्यट्याग प्रबन्धनट्याग प्रबन्धकट्रिगर पृष्ठदृश्यहरूसार्वभौमिक एनालिटिक्स
तपाईं एक वास्तविक पार्ट स्मेला हुनुहुन्छ - मेरो मतलब - स्मार्ट साथी 🙂 यो लेख एकदम सही छ - वास्तवमा मलाई GTM लागू गर्न आवश्यक थियो। स्क्रिन शटहरूको प्रशंसा गर्नुहोस्